Ahoana ny fampiasana Android Device Manager | Androidsis
Amin'ity lahatsoratra androany ity dia te-hametaka horonantsary iray izay hanazavako ny Fandidiana Android Device Manager, fampiharana maimaim-poana tanteraka izay azontsika alaina ao amin'ny Google Play Store amin'ny anaran'ny Android Device Manager ary manana safidy vitsivitsy ho an'ny fiarovana sy ny toerana misy ireo terminal Android misy antsika izy io.
Na dia tsy mitaky fahalalana na solosaina tahaka izany aza ilay rindranasa satria io no tsotra indrindra azontsika jerena ao amin'ny magazay fampiharana ho an'ny Android, tiako hatao izany famerenana horonantsary mba hahitanao ny fiasan'ity rindranasa manaitra ity izay tsy fantatry ny ankamaroan'ny mpampiasa Android akory.
1 Inona no atolotry ny Android Device Manager antsika?
Inona no atolotry ny Android Device Manager antsika?
Android Device Manager o Android Device Manager, manolotra anay feno efitrano fiarovana ho an'ny Android very na nangalarina, interface, izay hitanao amin'ny horonantsary eo an-tampon'ity lahatsoratra ity dia mora ampiasaina ary hanome antsika ny mety hisian'ny tadiavo ny Android very na nangalarina.
Raha vantany vao niditra ny interface interface, ny zavatra voalohany tsy maintsy hataontsika dia ny fisafidianana a Kaonty Google izay ananantsika nampifandray ilay fitaovana Android tadiavinay fa ho hitanay. Raha vantany vao miditra ny teny miafin'ny kaonty mifandraika amin'ny fitaovana na fitaovana isika, dia haseho antsika ny lisitry ny terminal izay ahafahantsika misafidy ny terminal izay tadiavintsika, toerana iray izay iseho isaky ny mirehitra izy io izany ho antsika miaraka amina sisiny hadisoana kely metatra vitsivitsy monja amin'ny sari-tany.
Safidy hafa atolotra antsika ao Android Device Manager, dia ny fahafaha-miditra amin'ny a kaonty vahiny, safidy tena mahaliana izay hahafahantsika mahita ilay fitaovana very, ohatra, ny olona fantatra rehetra mahalala ny kaonty Google sy ny teny miafiny. Mety izany hanampiana namana iray, miaraka amin'ny alalàn'izy ireo foana, hikaroka ilay terminal very na halatra.
Ankoatra ny fahitana ny terminal Android very, milalao ny ringtone amin'ny volume indrindra mandritra ny dimy minitra na mandra-pahatongantsika ny bokotra Power, Android Device Manager, dia manome antsika ihany koa ny famafana ilay fitaovana, na toy ny fanakanana azy mora foana amin'ny fampiasana tsy nahazoana alàlana, avy lavitra fotsiny amin'ny alàlan'ny fifandraisana Internet amin'ny alàlan'ny Wifi na tambajotra data.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » fiarovana » Ahoana ny fampiasana Android Device Manager, Android Device Manager